घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू एलेक्स Telles बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
एलेक्स टेलसको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्यहरू, पत्नी, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली, र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दहरूमा, हामीसँग यहाँ छ, ब्राजिलियन फुटबलरको लाइफ स्टोरी, शुरुआती दिनदेखि लिएर जब उनी प्रसिद्ध भए। अब हेर्नुहोस् प्रिन्ट गर्न उसको प्रारम्भिक जीवन - यसले अलेक्स टेलिज बायोको स्पष्ट सार देखाउँदछ।
हो, धेरै प्रशंसकहरु लाई थाहा छैन कि उनी एक उत्कृष्ट खेलाडी बन्नको लागि संघर्षको बारेमा छन। अधिक, हुनसक्छ, तपाईंले केवल ब्राजिलियनलाई ट्रान्सफर बजारको बखत थाहा पाउनुभयो। हामी यहाँ उनको कथा भन्न को लागी छौं र अरु कुनै विज्ञापन बिना नै सुरु गरौं।
एलेक्स टेलिस बचपन कहानी:
जीवनी सुरुआतकर्ताहरूको लागि, उनका पूरा नामहरू अलेक्स निकोलाओ टेलेस हुन्। एलेक्सको जन्म डिसेम्बर १ 15 1992 २ को १ his तारिखमा उनको बुबा, जोस टेलिस र आमा क्लाउडेट टेलिसको शहर कक्सियस डो सुलमा भएको थियो।
ब्राजिलका फुटबलर संसारमा आफ्नो बुबाआमाको बीचमा जन्मेका दुई कान्छो छोराको रूपमा संसारमा आए जुन सम्भवतः उनीहरूको उमेर 60० को उमेरमा हुन सक्छ। उनीहरू बिना, त्यहाँ कुनै एलेक्स हुनेछैन।
प्रारम्भमा, सानो एलेक्स आफ्ना आमाबुबा र दिदीबहिनीबाट यति धेरै प्रेमले ग्रस्त थियो। मोरेसो, उसले आफ्नो परिवारबाट क्यान्डी वा खेलौनाहरू नलिई कम्तीमा एक वा दुई दिन बिताउन सक्छ।
पछाडि त, त्यो केटो भर्खरै चलिरहेको थियो जुन तपाईंलाई लाग्छ कि ऊ उ थियो Usain Bolt भेषमा।
उसको गति यति अविश्वसनीय थियो कि उसका साथीहरूले उनलाई सायद उनलाई समात्न सके। यहाँ ऊर्जावान केटाको दुर्लभ दृश्य छ जुन उसलाई कहिल्यै थाहा थिएन कि ऊ जीवनमा यो महान बन्ने छ।
एलेक्स टेलिज परिवार पृष्ठभूमि:
तपाईंको धारणाको विपरित, टेलिसका अभिभावक जहिले धनी भएनन्। उहाँ मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्कनुभयो। यद्यपि उसको परिवारले आफूसँग भएको सबैमा सन्तुष्ट थियो। तसर्थ, तिनीहरूको लागि जीवन धेरै राम्रो भयो।
सानो छँदा, टेलिसले आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्यसँग अतुलनीय बन्धन साझेदारी गरे। सत्य यो हो, उनकी बहिनीले उनलाई रुँदै गरेको देख्दा साह्रै गाह्रो भयो। तसर्थ, उनले एक ओभरप्रोटेक्टिव एल्डरको भाईको रूपमा काम गरेकी थिइन र विशेष गरी बुलीहरूबाट उसलाई जोगाउन यथाशक्य गरे। यहाँ ठूलो बहिनी छ जो सधैं बाल्यकालको दिनबाट आफ्नो फिर्ता आयो।
एलेक्स टेलिज परिवार मूल:
प्राय: भनिन्छ कि स्याउ स्याउको रूखबाट टाढा खस्दैन। त्यस्तै प्रकारले, एलेक्स आफ्ना पूर्वजहरूका विशेषताहरूमा कमी भएन। हामी सबैलाई थाहा छ, ब्राजिलले बेजोड कलाका खेलाडीहरूसँग संसारलाई समेट्यो, र टेलिस्ट सूचीबाट बाहिर छैन।
कुनै शंका छैन कि टेलसको परिवार कक्सियस डो सुलमा गहिरो जरामा रहेको छ जहाँ उहाँ जन्मनुभयो। यद्यपि उसको जातीयता ब्राजिलमा मात्र सीमित छैन तर इटाली पनि सामेल छ किनभने उसको हजुरबा हजुरआमा हजुरआमा इटालेली छन्।
के तपाईंलाई थाहा छ?… एलेक्स टेलिज अफ उत्पत्ति, क्याक्सियस डो सुल दक्षिणी ब्राजिलको रियो ग्रान्डे डो सुलमा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो एक औद्योगिक शहर हो, १ th औं शताब्दीका इटालियन आप्रवासीहरूले बनाएको।
एलेक्स टेलिस फुटबल कहानी:
युवा ब्राजिलियन फुटबल को लागी अचानक प्रेम विकास गरेन। बरु, उसले बिस्तारै सडक फुटबल खेल्ने आफ्ना साथीहरूको अपवादमा रुचि लिए।
टेलेस 8 बर्षको उमेरमा उनी पूर्ण रूपले विश्वस्त भए कि उनले प्रशस्त फुटबल प्रोफेशनल बन्नको लागि सबै समस्याहरू तोड्नेछ। यसैले, उनले सडक फुटबल खेल्नका लागि आफ्ना साथीहरूसँग ट्याग गरे।
सडकमा खेलिरहेको केहि वर्षले टेलिसलाई २०० in मा एस्पोर्ट क्ल्यूब जुभन्ट्युड युवा प्रतिष्ठानमा भर्ना हुनको लागि देख्यो।
एकेडेमीमा फुटबल खेल्ने काममा उसले सन्तुष्टि पाएको देखेर टेलिसले आफ्नो सीप बन्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा चलायो। हाम्रो टीमले उनको प्रारम्भिक उपलब्धिहरू एस्पोर्ट क्ल्यु जुभन्ट्युड युवा एकेडेमीका साथ प्रकट गर्दछ।
एलेक्स टेलस बायोग्राफी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नराख्नुहोस्, ब्राजीलका प्रतिष्ठित खेलहरु खेल्ने सुअवसर प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले धेरै वर्ष कडा प्रशिक्षण दिए। जब समय सहि भयो उनले १ 18 बर्षमा आफ्नो पहिलो प्रोफेशनल क्लब (जुभेंट्युड) को लागि शुरू गरे।
उक्त युवाले आफ्नो व्यवसायिक क्यारियरको शुरूआत आफ्नो कौशलता प्रदर्शनको साथ गरेका छन, जसले जुभेन्टुडलाई २०११ र २०१२ कोपा एफजीएफ जित्न मद्दत पुर्‍यायो।
Zlatan Ibrahimovic बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कम्तिमा आफ्नो अपवाद देखाएको एक वर्ष पछि, टेलिसलाई ग्रिमियोमा ट्रान्सफर गरियो जहाँ उनले दुई पटक भन्दा बढी बेस्ट वामपछाडि पुरस्कार जितेका थिए।
त्यस पछि, उनी २०१ 2014 मा गलातसारायमा सामेल भए र क्लबलाई सुपर लिग, टर्की कप र टर्की सुपर कप लगायतका धेरै ट्राफीहरू समात्न मद्दत गर्‍यो।
एलेक्स टेलिज बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
कलिलो उमेरमा धेरै हासिल गरेपछि ब्राजिलियाली शीर्ष टोलीहरू आकर्षित गर्न थाले। २०१ 2015 मा एक अवसरमा, टेलिसलाई चेल्सीमा फिलिप लुइस बदल्नको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनको लागि अफवाह गरिएको थियो। यद्यपि, अंग्रेजी क्लब कुनै पनि सम्झौताको माध्यमबाट तान्न सकेन। पक्कै पनि, उसलाई निराश छोडियो।
फेरि, जब उसले गलातसारायको लागि बढी प्राप्त गर्दै थियो loanणको ज्वारले उनलाई क्लबबाट टाढा लग्यो।
टेलिसलाई इन्टर मिलनसँग परिचित हुन ठूलो धैर्यता लाग्यो, जसले उनलाई २०१ in मा एक वर्षको loanणको लागि हस्ताक्षर गरे। उनको नयाँ क्लबमा उनले आफ्नो प्यारो गलातासाराय कोच, रोबर्टो मन्सिनीलाई नभेटेपछि परिस्थिति जटिल भयो।
एलेक्स टेलिस जीवनी - सफलता कहानी:
इन्टर मिलनमा, भाग्यले टेलिस भेट्टाए जब उनले जुलाई २०१ of मा एफसी पोर्टोसँग € .6.5. million मिलियन डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। पोर्तुगाली पक्षमा सामेल भएपछि उनले खेलको समय र प्रदर्शन बढी पाए।
तसर्थ, एलेक्स टेलिसले एफिसी पोर्टोमा प्राइमिर लीगाको डिफेन्डर अफ दि महिना र अन्य धेरै पुरस्कार जित्यो।
एलेक्स टेलस बायो लेख्ने समय भन्दा छिटो अगाडि, उनी निस्सन्देह, विश्वको सबैभन्दा अण्डररेटेड डिफेन्डर्स मध्ये एक हो। यसको बाबजुद पनि, उनको प्रभाव अझै सम्म FC Porto मा महसुस भएको छ।
उल्लेखनीय छ, उसको सम्पूर्ण परिवार आभारी छ कि ब्राजीलले अन्ततः २०१ Alex मा एलेक्स टेलिसको फुटबल शक्ति स्वीकार्यो।
त्यसकारण, टेलिसले मार्च २०१ 23 को २rd औं दिनमा आफ्नो देशको लागि पदार्पण गर्‍यो। बाँकी उनी भन्छन्, इतिहास हो।
ब्राजिलका लागि खेल्नु टेलेसको ठूलो उपलब्धी हो।
एलेक्स Telles सम्बन्ध जीवन:
विपरीत गेब्रियल Magalhaes २०२० देखि, टेलिसको एक सक्रिय प्रेम-जीवन छ। वास्तवमा, उहाँ पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रेमिका बनेकी श्रीमतीसँग प्रेमको सागरमा डुबेको देखिनुहुन्छ।
हाम्रो अध्ययनको परिणामले संकेत गर्दछ कि ऊ केवल एक महिलासँग सम्बन्धित छ उसको बाल्यकालदेखि नै। म निश्चित छु कि तपाईको बायोमा रहेको भाग्यमानी महिला को हो भनेर जान्न उत्सुक हुनुपर्छ। पढ्नुहोस्
एलेक्स टेलिस वाइफको बारेमा:
तिनीहरूको प्रेम कहानी निस्सन्देह, धेरै आकर्षक छ। ब्राजिलियाले अक्सर आफ्नो सुन्दर पत्नी प्रिस्किला मिनुजको फोटो साझा गर्न आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा लाभ उठाए।
अरु के छ त? एलेक्स र उनकी श्रीमतीले जून २०१6को 2018th औं दिनमा सेन्ट पेलेग्रीन चर्चमा गाँठो बाँधेका थिए। त्यसबेलादेखि, दम्पतीहरूले एक अर्कालाई साबुन ओपेरामा प्राप्त गर्न सकिने भन्दा बढी माया गरे। यहाँ प्रिस्किला मिनुजुको साथ एलेक्स टेलसको विवाहको झलक छ।
आउनुहोस्! मलाई आशा छ अन्य ब्राजिलियन ताराहरू मनपराउँदछन् विनिसीस जूनियर उनको सम्बन्ध जीवनबाट सिक्ने थियो। कम मैले बिर्सें, यस्तो देखिन्छ कि टेलसको बायो लेख्ने समयमा उसको बच्चा छ।
उसको छोरो हुने सम्भावना धेरै छ किनकि उसले आफ्नो परिवारको भागको रूपमा लगातार एउटा सानो केटोको फोटो प्रदर्शन गरेको छ। के यो एलेक्स टेलिसको छोरो हुन सक्छ?
एलेक्स टेलिस पारिवारिक जीवन:
राम्रो घर प्रशिक्षणले उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूको प्रजनन गर्दछ। यो विश्वास गर्नुहोस् वा विश्वास नगर्नुहोस्, टेलिज लाइफ स्टोरीले पूरा गरेको भए हुने थिएन यदि उसले आफ्ना बाबुआमाबाट पाएको प्रारम्भिक पाठको लागि होईन। अब हामी तपाईंलाई उसको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा उसको आमाबुबाबाट शुरू हुने बताउँदछौं।
एलेक्स टेलिस फादरको बारेमा:
ब्राजिलका बुबा, जोसे टेलिस आफ्नो प्रशंसनीय फुटबल शक्तिको एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। धेरै आश्चर्यचकित नहुनुहोस् यदि मैले तपाईंलाई भनेको थिए कि जोस एक समय फुटबलर पनि थिए।
यद्यपि उनले १ age वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सहायक मेकानिकको रूपमा आफ्नो काममा ध्यान दिन फुटबल छोड्नुभयो। अलेक्स टेलिसका बुबा, जोस टेलिसलाई भेट्नुहोस् जब उहाँ चिनदेखि चिनको मुस्कान लगाउनुहुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… टेलिसले पहिलो गोल ग्रिमियोको लागि आयो किनकि उसले आफ्नो बुबाबाट प्रेरणा पायो। आफ्नो पहिलो गोल प्रेरणाको लागि आफ्नो बुबाको लागि कृतज्ञताको एक अंशमा, एलेक्स टेलसले टिप्पणी गरे;
"एक खेलाडी हुनु एक सपना हो। मेरो बुवालाई थाहा थिएन कि म उसको लागि बाँचिरहेछु। म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न पाउँदा खुसी छु। ”
यो विश्वास गर्नुहोस् जब म तपाईंलाई भन्छु कि एलेक्स टेलसको बुबा जोस टेलिस अझै पनि फिट छ, आफ्नो बुढेसकालमा पनि। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनले एक पटक भाग लिएका थिए र of१ को उमेरमा १ 15 किलोमिटर म्याराथन पूरा गरे। बुवाको महान खेलाडी जाँच गर्नुहोस्।
एलेक्स टेलिसकी आमाको बारेमा:
ठूला आमाले सफल छोराहरू उत्पादन गरेका छन् र उनी पनि अपवाद छैनन्। एलेक्स टेलिस र उसकी आमा क्लाउडे बीचको बाहिर निस्किने आमा-छोराको सम्बन्ध अटूट छ।
पोर्टो खेलाडी अक्सर आफ्नो आमाको लागि आफ्नो गहिरो प्रेमको बारेमा कुरा गर्न आफ्नो इन्स्टाग्राम र फेसबुक पृष्ठहरूमा लैजान्छन्। उनको फेरि क्लेड टेलिसलाई भेट्नुहोस्, किनकि उनी चिनदेखि चिनसम्म मुस्कुराउँछिन्।
एलेक्स आफ्नो आमाको फोटो क्याप्शनमा प्यारा शब्दहरू भर्दछन् जसले उनलाई विश्वको सबै भन्दा राम्रो आमाको रूपमा घोषणा गर्छिन्। तपाईले देख्नु भयो कि क्लाडेट टेलसले उनको छोराको क्यारियरलाई समर्थन गर्दछ।
अक्सर, उनी लाइभ खेलहरू हेर्न स्टेडियम जान्छिन। निस्सन्देह, उनको आमा उसको नम्बर फ्यान देखिन्छ।
एलेक्स टेलस बहिनीको बारेमा:
आफ्नो जेठी बहिनी हेलेनलाई धन्यवाद, टेलिसले खुशीको बाल्यकालको आनन्द उठाए। जे होस् भाईबहिनीहरूको भिन्नता हुन सक्छ, तिनीहरूले एक अर्काको समर्थन गरेका छन् मान्छेको कल्पना भन्दा बाहिर।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, टेलेस दिदीले सँधै उसको लागि हेरचाह गरिरहेकी थिए किनकि उनीहरू सानो थिए। तसर्थ, उसले आफ्नो भाइ हुनु आवश्यक महसुस गरेन। तल चित्रित, दुबै भाई र बहिनीले एक अटुट बन्धन साझा गर्छन्।
एलेक्स टेलिस सम्बन्ध बारे:
उसको ध्यान केन्द्रित राख्ने ड्राइभि forces्गबलमध्ये एक हो उहाँको विस्तारित परिवार। समय बित्दै जाँदा, जवान केटाले आफ्ना काका, काका र काकीबाट उनलाई धेरै प्रशंसा गर्यो जसले उसलाई उत्प्रेरणा दियो। तसर्थ, उहाँ आफ्ना आफन्तहरूलाई निराश हुनबाट जोगाउन सक्दो कोसिस गर्नुहुन्छ।
यद्यपि, टेलिसले आफ्नो बुवा र हजुरआमाको बारेमा कुरा गरेका छैनन्। हामी आशा गर्दछौं कि उनले चाँडै उनीहरूको कथा संसारसँग बाँड्नेछन्।
एलेक्स Telles व्यक्तिगत जीवन:
फुटबलरहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जो उनीहरूको क्षमताको बारेमा निश्चित छन्, र म एलेक्सलाई औंल्याउँछु। FC Porto डिफेंडर कुनै पनि चुनौती सामना गर्न डराउँदैन। फुटबल खेल्नुको अलावा, उहाँ संगीत मन पराउनुहुन्छ।
अचम्मित हुनुभयो? एफसी पोर्टो डिफेन्डर राम्रो गीतहरू गाउँदै राम्रो छ। कसले जान्दछ, ऊ गाईको लागि डुब्न सक्छ यदि सोकर उसलाई असफल भएको थियो।
आफ्नो शुरुको दिनदेखि नै, टेलिसले समुद्री किनारमा भ्रमण गर्ने बानी बसाल्यो। आफ्नो गौरवका दिनहरूमा पनि ब्राजिलियन साथीहरूसँग समुद्र तट र नौकामा आराम गर्न अझै केही समय निकाल्दछन्। कहिलेकाँही, उहाँ आफैंको बोर्डको साथ छालहरू सर्फिंगमा संलग्न गर्नुहुन्छ।
एलेक्स टेलस जीवनशैली:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, टेलिसले निस्सन्देह यो प्रमाणित गर्‍यो कि उनी हर्षोल्लास जीवन बिताउँछन्। यद्यपि उसले आफुको लागि धेरै धन सम्पत्ति जमाएको छ, ऊ आफ्नो विलासी जीवनशैली को प्रदर्शन गर्न बाध्य छैन।
यद्यपि, उहाँ प्रियजनहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मान्नुहुन्छ जुन अपूरणीय छ।
एलेक्स टेलस नेट वर्थ:
बिभिन्न विश्व-प्रतिष्ठित क्लबहरूको लागि खेल्दै टेलिसको लागि महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यवाही हुन्छ। वास्तवमा, २०२० मा, एलेक्स टेलिसको कुल सम्पत्ति करिब € करोड .० लाख हुने अनुमान छ। एफसी पोर्टोमा, ब्राजिलियनले अनुमानित वार्षिक कूल तलब २ मिलियन डलर कमाउँछ।
एलेक्स टेलिस हाउस र कारहरू:
किनकि टेलिसले उसको कन्ट्री लिगमा खेल्छ, उसको लागि आफ्नै विलासी घर र कारहरू स्वामित्व लिन सजिलो भएको छ। यद्यपि उनी आफ्नो महँगो सम्पत्तीको फोटो सोशल मीडियामा साझा गर्नमा रुचि राख्दैनन्।
एलेक्स टेलिस तथ्य:
हाम्रो जीवनी गोल बनाउन, यहाँ केहि सत्य छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवनको कथाको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: उसको तलब ब्रेकडाउन प्रति सेकंड कमाई:
प्रति महिना € 166,667
प्रति हप्ता € 38,402
प्रति दिन € 5,486
फेरि, हामीले घडीमा टिकको रूपमा एलेक्स टेलसको कमाई रणनीतिक विश्लेषण गरेका छौं। कृपया, प्रति सेकेन्ड उसको तलब हेर्नुहोस् र तपाईं यहाँ आएदेखि उसले कत्ति धेरै कमायो हेर्नुहोस्।
यो के हो एलेक्स टेलिसले कमाएको छ किनकि तपाईंले उसको बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # १: ओस मैयर्स पेक्वेनोस हेरिस परियोजनाको राजदूत:
क्यान्सरको बिरूद्ध उग्र युद्ध जित्ने प्रयासमा, टेलिसलाई २०१ in मा ओस मैयर्स पेक्वेनोस हेरिस परियोजनाको राजदूत नियुक्त गरिएको थियो।
आफ्नो परोपकारी प्रकृतिका कारण, उनले राम्रो भाग्यमा जिम्मेवारी स्वीकार गरे धेरैको जीवनलाई उनीहरूको भयानक रोगबाट बचाउने उद्देश्यले।
टेलिसले सम्मान पाउनु भन्दा केही वर्ष अघि उनले क्यान्सर बिरामीलाई सहयोग गर्ने ठूलो चासो देखाए। प्रभावित व्यक्तिहरूमा उनको यति धेरै भ्रमणहरूमा उनले टिप्पणी गरे;
"बाल क्यान्सर संस्थान भ्रमण गर्नुभयो! तिनीहरूको मुस्कान सबै भन्दा राम्रो प्रतिशोध हो! आजको भ्रमणबाट जीवनको ठूलो पाठ सिके! ”
तथ्य # १: एलेक्स टेलस कुकुरहरू:
एउटा चीज जुन उहाँ र उसको पूरै परिवार बीचमा समान हुन सक्यो कुकुरहरूप्रति उनीहरूको प्रेम। उसले आफ्नो घरपालुवा जनावरसँग खेल्दै बिना नै एक दिन गाह्रो हुन सक्छ।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, FC Porto स्टारमा दुई कुकुरहरू छन् जसको अर्थ उसको लागि धेरै हो। कुकुरप्रतिको उनको प्रेम अतुलनीय छ।
तथ्य # १: एलेक्स टेलस ट्याटूहरू:
टेलसले आफ्नो शरीरमा धेरै ट्याटूहरू राखेका छन् भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन। तपाईंहरू मध्ये सबैको लागि जसले उसलाई लगातार खेल्नु भएको छ, निश्चय हुनुहुन्छ कि तपाईंले सायद आफ्नो देब्रे पाखुरामा टाँसिएका ग्लिमरिंग ट्याटुहरूको प्रशंसा गर्नु भएको होला। ऊ कसरी अनजाने ट्याटू प्रदर्शन गर्दछ हेर्नुहोस्।
वास्तवमा, मसीको बारेमा उसको दृष्टिकोण उस्को साथी ब्राजिलियन फुटबलरको जस्तै छ, एन्डरसन तालिका.
तथ्य # १: एलेक्स टेलिस धर्म:
सबैलाई थाहा छ ब्राजिल एउटा धार्मिक देश हो र यसका अधिकांश नागरिकहरूले क्याथोलिक अभ्यास गरिरहेका छन्।
जस्तै फेरन टोरेस र Quique Setien, टेलिस एक क्याथोलिक हो जसले आफ्नो इसाई विश्वासलाई प्रेम गर्दछ। उनले अक्सर पृष्ठभूमिमा आफैंले डिजाइन गरेका केहि तस्वीरहरू अपलोड गरेको हुन्छ जुनमा हाम्रो महिलाको (मरियम, येशूकी आमा) समावेश छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… एलेक्स टेलिसले आफ्नो जर्सी नम्बर १ select संयोगको रूपमा चयन गरेन। बरु, उनले मेरीको apparisation को सम्मान मा नम्बर छान्नुभयो, जुन पोर्चुगल मा प्रत्येक महिना को १ 13 औं दिनमा (मे देखि अक्टुबर) १ 13 १ in मा भयो।
तथ्य # १: उत्कृष्ट फिफा रेटिंग:
एलेक्स टेलिसको प्रदर्शनले फिफालाई मार्सेलो र डान अल्वेजको जस्तै समान तहको स्तरमा राख्न बाध्य तुल्याएको छ।
कुनै श ,्का छैन, ऊ ठूलो बचाव लाइन हुनेछ यदि टेलसले कहिले पनि सँगै खेल्न सौदा गर्छ भने वान Bissaka, Maguire, र Lindelof। तल उसको तथ्या below्क जाँच गर्नुहोस्, केटाले लगभग सबै कुरा भयो।
उसको बायोको द्रुत सारांश पाउन यहाँ टेबुल छ जुन उनको एलेक्स टेलिज प्रोफाइल प्रदर्शन गर्दछ।
पुरा नाम: एलेक्स निकोलाओ टेलेस
जन्म मिति: 15th डिसेम्बर 1992
जन्मस्थान: स्याक्सिया डो सुल
पिता: जोस टेलिस
आमा: क्लाउड टेलिस
Siblings: हेलेन टेलिस
पत्नी: प्रिस्किला मिनुजो
बजार मूल्य: € 40.00m
अनुमानित वार्षिक तलब: €2मिलियन
पालतू जनावर: कुकुरहरू
रुचि: गाउँदै र सर्फ गर्दै
उचाइ: १.1.81१ मीटर (मीटरमा) र ′ ′ ११ ″ (खुट्टामा)
अन्तमा, हामीले जान्नुपर्दछ कि हामी बाहेक अरू कसैले हामीलाई हाम्रो सपना साकार गर्न मद्दत गर्दैन। आउनुहोस् एलेक्स टेलस जीवन कहानीबाट पाठ सिकौं र हाम्रो क्यारियरको उचाइमा हाम्रो मार्गमा काम गरौं।
याद राख्नुहोस्, तपाईले कहिले पनि आफ्ना सपनाहरू प्राप्त गर्ने थिएन जब सम्म तपाईंले त्यसो गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न। हामी आफ्नो उत्कृष्ट व्यक्तित्वमा योगदान पुर्‍याउन एलेक्स टेलिसका आमा बुबा र ठूली बहिनीप्रति आभारी छौं।
एलेक्स टेलस बायोग्राफीमा धेरै समय व्यतीत गरिसकेपछि, हामी यसलाई यहाँ समाप्त गर्ने निर्णय गर्‍यौं। दिमागमा राख्नुहोस् कि हाम्रो टोलीले प्राय: तपाईंलाई क्वालिटी सामग्री प्रदान गर्न कडा परिश्रम गर्दछ।
जहाँसम्म, यदि तपाईले Telles को यो बायो संग सहि लाग्दैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
ह्वाang Hee- चान बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
हारून Ramsdale बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
ओलिभर छोड्नुहोस् बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
Arnaut Danjuma बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
एफसी पोर्टो फुटबल डायरी
Denzel Dumfries बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सर्जियो ओलिवियरा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू